> Resource > Utility > Sida loo dayactir Khaladaadka Mscorwks.dll Fast iyo si fudud
Dhibaan baadi fariimaha Mscorwks.dll
• Mscorwks.dll lagama helin
• Codsigan ku guuldareystay inuu ku soo bilowdo, maxaa yeelay, ma mscorwks.dll laga helay. Dib-u-rakibidda codsiga hagaajin laga yaabaa in dhibaatadan.
• Ma heli karaa [PATH] mscorwks.dll
• mscorwks.dll file waxaa ka maqan.
• ma bilaabi karaan [ARJIGA]. Qayb A baahan yahay waxaa ka maqan: mscorwks.dll. Fadlan rakibi [ARJIGA] mar kale.
Maxaa keeni karaan qaladaad Mscorwks.dll?
• uninstall barnaamijka gaar ah laga saaro file Mscorwks.dll kuwaas oo ay wadaagaan barnaamij kale ama nidaamka.
• Waxaad ku rakiban barnaamij gaar ah in uu keeno file Mscorwks.dll ahaa overwrote la version waayeel ah ama version taas oo ah in aynan goob hadda ah.
• The file Mscorwks.dll ama entries ay diiwaanka la xiriira ayaa la jebiyo kombiyuutarada, ama si qalad ah la tirtiro fayraska / spyware ama kuwa kale ee isticmaala.
Sida loo hagaajin khaladaad Mscorwks.dll?
1. Orod baaritaan buuxa ee kombiyuutar
Marka uu aqrinayo qalad, ordo baaritaan buuxa ee kombiyuutar ee had iyo jeer waxa uu noqon karaa waxa ugu horeeya ee la filayo in la sameeyo aan. Reynaya furin ah, adware, spyware iyo virus, hubi in computer ka waddaa jawi nabdoon.
2. barnaamijyada leheyn uninstall
Mararka qaarkood baadi Mscorwks.dll dhacdaa ayadoo sababta keliya oo barnaamijka ku rakiban yahay in aynan nidaamka. Saasuuna waa in aad uninstall barnaamijka, sida caadiga ah mid ka mid ah aad dhawaan ku rakiban ka hor inta qalad ah ku dhaca. Taasi waxaa laga yaabaa inay sabab u baadi Mscorwks.dll.
3. Download Mscorwks.dll cusub
Haddii file Mscorwks.dll ku maqan yahay ka dib markii aad uninstalled barnaamijyo gaar ah, aad u saaro laga yaabaa in ay la socdaan uninstall, ama Mscorwks.dll burburtay ay sabab u tahay weerar fayraska. Under xaaladdaan, waxaad kala soo bixi kartaa file cusub Mscorwks.dll internetka. Waxaa jira in badan oo laga heli karo website-Mscorwks.dll download. Markaas waa inuu ku shubaa folder hoos ku qoran:
4. diiwaanka Nadiif ah
Marka barnaamij la geliyo iyo mid hore ah oo si buuxda ma uninstalled 100%, waxay keeni karaan in baaritaan raso diiwaanka oo soo baadi DLL ah. Markaas waxaa loo baahan yahay nadiifinta diiwaanka. Sida mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee Windows, database diiwaanka Qori hawlgal kasta oo ka mid ah nidaamka. Marka khaladka soo booda, diiwaanka waxaa sidoo kale isku mar bedelay. Hel ka nadiifsan diiwaanka si aad u nadiifiso diiwaanka haddii aadan geek ah. Ha halis bedelayaan diiwaanka gacanta.
5. Soo Celinta Mscorwks.dll
Haddii aad si qalad ah u tirtirto Mscorwks.dll oo ka dhigay qalad ah, waxaad dooran kartaa in ay u soo celin la soo kabashada xogta barnaamijka, kaas oo kuu ogolaanaya in aad dib u soo ceshano file Khasaaray. Markaasaa waxaa u badbaadin meeshii asalka.
Siyaabaha la isu dayactir Error Runtime ee Internet Explorer